Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Tohizo ny fiziriziriana!
Inty sy nday: Tohizo ny fiziriziriana!
Niteraka olana vaovao indray teo anivon’ny samy mpikambana o anatin’ny governemanta ny fanambarana teti-androm-pifidianana nataon’ny minisitra ny Raharaham-bahiny Malagasy, Henry Rabary Njaka tamin’ny haino aman-jery tany ampitan’ny ranomasina tany.
Mpikambana ao amin’ny governemanta ankehitriny no tsy nihambahamba nilaza taminay omaly raha nanontaniana ny fahitany ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny izy. Hoy indrindra ity minisitra ity “aoka tsy hifampihatsaravelatsihy fa mazava aloha ny anay fa karama no ipetrahanay ao anatin’ny governemanta fa izao efa iaraha-mahita izao fa tsy misy raharaha mandeha ary ny andraikitray mpitondra fanjakana foibe indrindra no tsy misy mandeha amin’ny tokony ho izy fa mikatso, ka mitarika izao fahasahiranana mianjady amin’ny vahoaka izao”.
“Na izahay ao anatin’ny fitondram-panjakana ao aza efa tsy misy firaisan-kina izany intsony”, hoy ihany ity minisitra ankehitriny ity. Dia noraisiny ho ohatra mivaingana ny tenin’ny minisitra Roland Ratsiraka nandritra ny fivorian’ny filankevitra ny governemanta ny alatsinainy teo, momba iny fanambaran-dRabary Njaka Henry ny tetiandrom-pifidianana tany Frantsa iny. Vao nanomboka ny fivoriana, hoy ity minisitra tafaresaka taminay omaly ity, dia nitsangana ny minisitra Roland Ratsiraka ka nitaky ny hitondran’Ingahy Praiminisitra fanazavana eo imaso imaso hoe “ny tenanay ve no tsy nanatrika fivorian’ny filankevitra ny governemanta ka tsy nahafantaranay ny fanapahan-kevitra noraisina tato sy namaritana ny tetiandrom-pifidianana sa misy fanapahan-kevitra hafa raisina ivelan’ny fivorian’ny filankevitra ny governemanta eto fa izahay no zary lasa tsangan’olona fotsiny?”
Efa endrika isehoan’ny saritaka eo anivon’ny governemanta izany, ary na ny Praiminisitra Solonandrasana Olivier Mahafaly aza, hoy ity minisitra ity omaly, dia nanaboribory ny valim-panontaniany fotsiny hoe “aoka izay iny resaka iny fa efa nivalona any ka tsy sokafantsika intsony e!”
Tsy te hanan-dratsy ve ny praiminitra sa tsy te ho ratsy endrika eo anoloan’ny filohampirenena, satria fantany fa raha ny fifamatorana am-po eo amin’ny resaka pôlitika dia tsy hatakalon-dRajaonarimampianina an’i Henry Rabary Njaka mihitsy ny praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana.
Na izany na tsy izany, mifandray tanteraka amin’ny lahatsoratra navoakan’ny Namana Rabelaolao teto tamin’ny talata ny resaka eto hoe “tokony hametra-pialana mihitsy ny filohampirenena satria izy no vovonana iadian’ny tafony, mahatonga izao fihemoran’ny firenena sy fikatsoan’ny raharaham-bahoaka ary mitarika fihomboan’ny fahantran’ny ambanilanitra izao.” Sa sanatria mbola manana fahasahiana hiziriziry eo ihany ka hiandry ny hatezeram-bahoaka?
Aza hadinoina fa ny vahoaka rehefa hitany fa feno ny kapoaka mangidy ampiziogainao azy dia tsy te hahalala izy hoe “tsy ankasitrahan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny hetsi-bahoaka manaisotra mpitondra fanjakana tsy amin’ny alalan’ny fifidianana.” Ho an’ny vahoaka dia vonjy aina no atao ka izay hahitana vahaolana ho amin’izany no irosoany satria ny fahendrena Malagasy dia nampianatra azy hoe “aleo maty rahampitso toa izay ho faty anio”, ary tsy mifanalavitra amin’izany ilay hoe “raha ho faty aho, matesa rahavana, raha ho faty ny havana, matesa ny omby…”
Dia ahoana àry? Mbola hiziriziry ihany sa…?